Xukunka lagu riday Aung San Suu Kyi oo la cambaareeyey
10-kii Janaayo, maxkamad ku taal Burma ayaa ku xukuntay Aung San Suu Kyi, hoggaamiyaha la doortay ee Burma, afar sano oo xabsi ah, kadib markii lagu eedeeyay inay si sharci darro ah u soo dejisay oo haysatay sheeko-yaqaanno, ku xad-gudbid sharciga isgaarsiinta, iyo ku xadgudubka xannibaadaha coronavirus.
Tani waxay daba socotaa xukun afar sano ah oo ka yimid maxkamad Diisambar 6, 2021, oo lagu eedeeyay kicin dadweyne iyo jebinta borotokoolka COVID-19. Xukunkii hore ayaa markii dambe laga dhigay labo sano.
Intaa waxaa dheer, Aung San Suu Kyi waxay wajaheysaa toban ama in ka badan eedeymo kale. Haddii lagu helo dambiga, waxaa lagu xukumi karaa ilaa boqol sano oo xarig ah.
Madaxa Qaramada Midoobay u qaabilsan xuquuqul insaanka Michelle Bachelet ayaa sheegtay in "xukunka lagu xukumay lataliyaha dawlada kadib dacwad been abuur ah oo la horkeenay maxkamada uu militarigu gacanta ku hayo ma aha wax siyaasad laga leeyahay," halka ku xigeenka agaasimaha qaybta Asia ee Human Rights Watch Phil Robertson uu xusay Habka "dhammaan waxa uu ku saabsan yahay in si joogto ah loo ururiyo xukunno badan oo ka dhan ah Aung San Suu Kyi si ay ugu sii jirto xabsiga si aan xad lahayn."
"Waxaan ugu baaqaynaa taliska inuu si degdeg ah u sii daayo Aung San Suu Kyi iyo dhammaan kuwa sida xaq-darrada ah u xiran, oo ay ku jiraan hoggaamiyeyaasha kale ee si dimuqraadi ah loo soo doortay, ayuu yiri afhayeenka Wasaaradda Arrimaha Dibadda Ned Price.
"Habab garsoor oo been abuur ah oo talisku ku weerarayo dadka ka soo horjeeda siyaasadda, sharciga, iyo sidoo kale isticmaalka joogtada ah ee rabshadaha ka dhanka ah dadka Burma waxay kaliya hoosta ka xariiqayaan degdegga ah ee soo celinta Burma Jidka dimoqraadiyadda.” ayuu sii raaciyay.
Aung San Suu Ky waa hogaamiyaha National League for Democracy, ama xisbiga siyaasadeed ee NLD. Bishii Noofambar 2020, NLD wuxuu ku guuleystey doorashada qaranka farqi weyn labada Aqal ee Baarlamaanka Burma ee Midowga. Febraayo 1, 2021, militariga Burma, oo xisbigoodu ku guuleystay 33 kursi oo ka mid ah 476 kursi ee Baarlamaanka, ayaa sameeyay afgambi. Aung San Suu Kyi waxaa lala xiray madaxweyne Win Myint, wasiirro badan, ku xigeenadooda, iyo xubno ka tirsan baarlamaanka.
Eedeymaha beenta ah ee lagu soo oogay ayaan hoos u dhigin caannimadeeda, taasoo maanta taagan ku dhawaad 80 boqolkiiba. "Dadka Burma… waxay sii wadaan inay muujiyaan inaysan doonayn inay ku qaataan maalin kale oo ay ku hoos jiraan kalitalis militari, waxaana sii wadi doonnaa inaan taageerno iyaga iyo dhammaan kuwa si nabad ah uga shaqeynaya soo celinta waddadii Burma ee dimuqraadiyadda," ayuu yiri afhayeenka Price.
"Waxaan sii wadeynaa inaan ugu baaqno taliska inuu la galo wadahadal wax ku ool ah dhammaan dhinacyada si loo raadiyo xal nabadeed oo danta dadka." ayuu ku soo gabagabeeyay.